Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump Oo Cadho Kula Dul Dhacay Dadka Soo Gudbiyay Xilka Qaadistiisa - Borama News Network
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump Oo Cadho Kula Dul Dhacay Dadka Soo Gudbiyay Xilka Qaadistiisa
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraadiga, kuwaas oo dalbaday in Trump wax laga weydiiyo eedeemaha loo jeediyay.
Trump ayaa sheegay in Dimuqraadiga ay wakhtiga iska luminayaan, wuxuuna weerar afka ah ku qaaday guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Aqalka Kongreska ee Mareykanka, Adam Schiff. Trump ayaa sidoo kale sheegay in Adam Schiff isagaba laga baaro in uu sameeyay khiyaano qaran.
Guddoomiye Adam Schiff, ayaa sheegay in xukuumadda Trump ay isku dayayeeso inay buuq ku furto guddiga uu hogaamiyo oo uu sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo ogaan lahaa xaqiiqda ku saleysan wicitaankii dhanka taleefoonka ee dhexmaray Trump iyo dhigiisa Ukraine, kaas oo la sheegay in Trump uu ka dalbaday in baaritaan lagu sameeyo Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Joe Bidden iyo wiil uu dhalay oo horay uga soo shaqeeyay shirkadda Gaaska ee dalka Ukraine.
Schiff waxaa kale oo uu sheegay in tallaaba walba oo lagu hor istaago helitaanka macluumaadka la xiriira arrintaas ay keeni karto in xukuumadda Trump lagu eedeeyo jebinta sharciga, horseedi kartana xil ka qaadis.
Madaxaweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa hadalkan ka sheegay xilli ay si wadajir ah shir jaraa’id u qabanayeen isaga iyo dhiggiisa dalka Finland, Sauli Niinistö, waxaana Trump uu maalmahan ba culeys siyaasadeed kala kulmayay siyaasiyiinta xisbdiga dimuqraadiga ee aqalka Kongreska ee Mareykanka.
Trump wuxuu sidoo kale si carro leh uga jawaabay su’aal uu weydiiyay weriye katirsan wakaaladda wararka ee Reuters.
Weriyaha ayaa Madaxweyne Donald Trump weydiiyay su’aal ahayd maxaad dooneysay in Madaxweynaha Ukraine uu ku sameeyo Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka, Joe Bidden, iyo wilkiisa. Trump ayaa halkii la rabay in uu su’aasha ka jawaabo waxaa uu weriyihii kala dul dhacay cannaan.
“Waxaan ku iri haddii aad su’aal qabto weydii Madaxweynaha Finland oo madax adeega jooji, ” ayuu yiri Trump.
Wuxu intaa raaciyay in eedeemaha loo jeedinayo aysan waxba ka jirin oo ay bunbuuninayaan dad uu kamid yahay isla weriyahaas iyo warbaahiin uu ku tilmaamay inay baahiyaan warar been abuur ah.
Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale caro kala dul dhacay guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee aqalka Kongreska, Adam Schiff, oo uu sheegay in uusan daacad ahayn, wuxuuna ugu baaqay in uu xilkaas iska casilo.
“Dhab ahaantii waa inay isaga wax ka weydiiyaan in uu galay khiyano qaran.”, ayuu raaciyay Madaxweyne Trump.
Mr Trump waxaa kale oo uu sheegay in uu aaminsan yahay in Schiff uu qofka sirta dusiyay ka caawiyay in uu gudbiyo dacwadda, isagoon wax caddeyn ah soo bandhigin.
Waxaa maalmahan ba la hadal hayay in qofka dusiyay sirta la shaciiyay, la siiyo badbaado, hasayeeshee Madaxwyene Trump ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo jeediyay, wuxuuna weriyeyaasha u sheegay in qofka waxa uu sheego uu waafaqsan yahay sharciga la badbaadin karo oo keliya.
“Dalka waa in uu ogaadaa ninkan qofka uu yahay, maxaa yeelay qofkaas waa basaas, sida ay ila tahay aniga,” ayuu raaciyay.
Wuxuu Trump eedeemaha loo jeediyay ku tilmaamay kuwa aan waxba ka jirin oo been abuur ah, wuxuna intaa raaciyay in uu la shaqeyn doona aqalka Kongreska.
Qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ayuu Trump ku eedeeyay afhayenka aqalka Kongreska, Nancy Pelosi iyo Schiff, oo uu sheegay inay ku hawlan yihiin waxyaabo qurun ah, wuxuuna intaa raaciyay Nancy looga baahan yahay inay wax ka qabato halkii laga soo doortay ee San Francisco, oo uu sheegay inay ku badan yihiin dadka derbi jiifka ah.
Siyaasiyiinta xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa Aqalka Cad ku eedeeyay inay hor istaagayaan ka sal gaaridda arrintan iyo in aysan ka jawaabeynin codsiyada loo soo diro.
Kongreska ayaa sidoo kale sheegay in qorshaha xil ka qaadista ee Madaxweyne Trump ay u wajihi doonaan si cadaalad ah.
Xafiisk Wararka BoramaNews
Raysal Wasaare 16 Milyan Siiyay Gabadh Uu La Haasaawayay Iyo Qaabka Loo Ogaaday Lacagtaasi
“Burco Nabad Ahaan Mayso,Ceelafweyna Qiiqi Mayso Ayaan Been La Isku Sheegin” Cali Duulduul
Xasan Sheekh Oo Si Adag U Hadlay Markuu Kismaayo Ka Degay
Mustafehaji October 11, 2019 October 11, 2019
“Manu Aqoonsanin Somaliland Ee Midnimada Somaliya Ayaanu Ka Shaqaynaynaa” Madaxwayne Ku Xigeenka Jubaland
Bnnstaff October 7, 2019
Dawladda Australia Oo Safiir Cusub Usoo Magacowday Dalka Soomaaliya
Mustafehaji October 5, 2019
WARAR XIISO LEH: Fatahaada Wabiga Shabeelle iyo Xaalada Lubnaan...
Mustafehaji October 22, 2019
ilmo Galeen Macmala Ama Gacan Ku Sameys Ah Oo...
Fatahaada Wabiga Shabeele Oo Saamayn Xoogan Ku Yeeshay Magaalada...
Bnnstaff October 22, 2019
Ciidamada Kenya Oo Sheegay In Ay Laayeen Dad Ay...
Barnaamijka Masraxa Siyaasada Iyo Siyaasi Geel Jire Oo Ka...
OSLO: Police ka Oo Toogtay Dirawalkii Ambulance Weerar Loo...
Madaxwayne Farmaajo Oo Gaadhay Dalka Ruuska Iyo Qaabka Loogu...
Bnnstaff October 22, 2019 October 22, 2019
Madaxa Shirkada Dp World Oo Sheegay In Malaayiin Dolar...
Siyaasi Uurcade Oo Muuse Biixi Iyo Xisbiyada Somaliland Ku...